Nang Lon Lon says:
အခုလို ကင်ချီလုပ်နည်းကိုကြည့်ခွင့်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စားကြည့်ဦးမယ်နော်
နောက်လဲ ကောင်းနိုးရာရာ ကိုးရီးဟင်းချက်နည်းတွေကို တင်ပေးပါဦး ကိုးရီးယားကားတွေကြည့်ပြီး စားချင်ပေမဲ့ မလုပ်တတ်တော့လေ အရမ်းကို Thanks ပါ
ဟုတ်ကဲ့ပါ.. အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ကိုရီးယား ဟင်းချက်နည်း အများစုကို တင်ပေးထားပါတယ်.. 🙂
Thanks you also sis 😛
ဒီတစ်ခါ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်လုပ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
စီးတီးမာတ် မှာ ကင်ချီအနှစ်ဆိုပြီး ရောင်းတာရှိတယ်။ ဟင်းချက်ဖို့လား ဘာလားတော့မသိဘူး။ အဲဒါသုံးရင်ကောင်းလား။
ရှားရှားပါးပါး မြန်မာလို ဟင်းချက်နည်းသီးသန့်ဆိုဒ် တင်ပေးနေတဲ့ အတွက်
It doesn’t need boiled sticky rice power to makeapaste..??? I madeakimchi by your own way, sis ..but doesn’t work..already made last week..not sour until now.. 😀 😀 Give me some advice ..sis .. thanks ..and Thanks for your blog..
really. For me I did it, it work. ကင်ချီလုပ်နည်းကတော့ အများကြီးပဲ၊ ၀တ်ရည် ရေးထားတဲ့ ကင်ချီလုပ်နည်းက အလွယ်ဆုံးနဲ့ အချိန်တိုအတွင်း လုပ်နည်း။ တချို့ဆို ကိုရီးယား ငရုတ်သီးနှစ်၊ ပြည်ကြီးငါး တို့ထည့်လုပ်ကြတယ်
Thanks, sis.. Today, I got my home made new Kimchi..
🙂 🙂 Thanks for your advice..I will try another delicious Kimchi….
ကျေးဇူးပဲ မ၀တ်ရည် 🙂
မဝတ်ရည်ရေ ကျနော် ကင်မ်ချီလုပ်တာ
ဒီနည်းက တခြား ကင်ချီတွေလို အရမ်းချဉ်ချဉ်ကြီး မဖြစ်ဘူး။ အမြုပ်ထွက်ပြီ အနေတော်ရင် စားလို့ရပါပြီ.. နောက်ကင်ချီ လုပ်နည်းအသစ်တမျိုးတင်ပေးပါအုန်းမယ်
I will post later sis!
ရေခဲသေတ္တာ ထည့်ရင်ချဉ်ပါ့မလား အမ စိတ်ထင်တော့မချဉ်လောက်ဘူးထင်တယ်
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထည့်လည်း ချဉ်ပါတယ်..
ှ့Shee shee Zaw says:
Thank you so much for your efforts Ma Wut Yee. I have been reading your posts since this morning 🙂
Can you please post about ‘shan mont nyin chin’. I am here in US and our home made one tastes not bad, but smells not really same as real one 🙂 thanks again and <3 u…..
ok I will try post Shan Mont Nyin Chin Later. Thanks also! 🙂
ရေခဲသေတ္တာမရှိရင်ကောဘယ်လို စိမ်ရမလဲအမ ပြောပြပေးပါ
ကင်ချီစိမ်ထားပြီ အခန်း အပူချိန်နဲ့လည်း နုပ်ထားရင် ရပါတယ်
Thank you ma wit ye 😉 pls
လုပ်စားကြည်.မယ်နော် အပြင်မှာဝယ်စားရင်ဈေးကြီးလို. ဟီဟီ
ဝတ်ရည်ရေ. ငရုတ်သီးမှုန့်အစား ငရုတ်သီးအနှစ်ကိုသုံးရင်ကောရလားဟင်? အရင်တစ်ခေါက်က မြန်မာပြည်မှာ ဟင်းချက်တဲ့အခါ ဆီသတ်ရင်သုံးလေ့ရှိတဲ့ ငရုတ်သီးမှုန့်နဲ့စမ်းလုပ်ကြည့်တာ မဖြစ်လို့လေ။ဒီတစ်ခါ ဝတ်ရည်ရဲ့ နည်းနဲ့ထပ်လုပ်ကြည့်ဦးမယ်:)
ဟုတ် ငရုတ်သီးနှစ်နဲပဆို ပိုကောင်းပါတယ်
Plz try sis 🙂
Do we need to put gochujang in in it?????
gochujang ထည့်ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့.. sis 😀
ငရုတ်သီးမှုန့် က ဘာဟာလဲ?အ ရောင် တင် မှုန့် ကိုပြောတာလား?ငပိရည်ထဲထည့် စားရတဲ့ ဟာကိုပြောတာလား?
ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့်ကို ပြောတာပါ။ ငပိထဲထည့်တဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းမှုန့် မဟုတ်ပါဘူး…
အမရေ ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုံဆိုတာ ဟင်းချက်ရင်သုံးတဲ့အစိမ်းမှုံကိုခေါ်တာမလား မ၀တ်ရည်ရေ ကျေးဇူးပြု၍ဖြေပေးပါအုံးနော်
ကင်ချီစားချင်တာကြာပြီ ဒီနည်းလည်းလုပ်စားကြည့်မယ် နောက်ထပ်တစ်နည်းရှိရင်လည်းတင်ပေးပါအုံးနော် မမ၀တ်ရည် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
kimchi ka ma chin pl nat chilliaya thr pl htwt nay dl ama. ae dr br kyauk pr la ama?
ဒီကင်ချီလုပ်နည်းက ကင်ချီကို အချိန်ကြာကြီး မသိပ်ပဲ မြန်မြန်စားချင်သူတွေ အတွက်မို့၊ တခြား ကင်ချီတွေလို အရမ်း အချဉ်မပေါက်တာပါ။ အချဉ်ပိုပေါက်ချင်ရင် အချိန်ကြာကြာ ပိုထားပေးရပါတယ်..
ဟုတ်ကဲပ ကြိုးစားတင်ပေးပါ့မယ်နော် sis.. 😉
မဝတ်ရည်ရေ…အခုလို ဟင်းချက်နည်းတွေဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ ကင်မ်ချီက ရှာလကာရည်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မှ အချဉ်ပေါက်ပြီးပိုကောင်းသွားတယ်..ဒီအတိုင်းဆိုဘယ်လောက်ကြာကြာထားထား အချဉ်မပေါက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
အမ ပျားရည် နဲ့အရက် ကိုရောထည့်လို့ရလား
မဝတ်ရည်ရေ.. ကင်ချီထဲကို ထည့်တဲ့ ငံပြာရည်က မြန်မာ ငံပြာရည်ပဲလား..တံဆိပ်လေးသိချင်ပါတယ်မ..
ငရုတ်သီးမှုန့်ဆိုတာကကော အရောင်တင်မှုန့်ကိုပြောတာလား မဝတ်ရည်..
တင်​သမျှသိချင်​တယ်​ facebookကlike ​ပေးထားတယ်​တခါကြည့်​ချင်​ရင်​ပြန်​ရှာ​နေရလို့ပါအလုပ်​က​မော​မောနဲ့ပြန်​လာတဲ့အမျိုးသားအတွက်​ အ​ကောင်းဆုံးထမင်းဝိုင်း​လေးပြင်​ဆင်​​ပေးချင်​တယ်​ အမြဲတမ်းချတ်​ရင်​အစပ်​အဟတ်​မတည့်​ဘူး
ဟင်းလည်းသိပ်​မချတ်​တက်​ဘူး ဒီမ​လေးမှာက ကြက်သားဝက်​သားပဲမရိုး​အောင်​စား​နေရတယ်​ ​ဈေးကလည်းခဏခဏမသွားဖြစ်​ဘူးတနင်္ဂ​နွေနားရက်​ရတာနဲ့​ဈေး​ပြေးပြီးတပါတ်​စာဝယ်ေ၇ခဲ​သေတ္တာထဲထည့်​ထားအဲ​တော့တခါလည်းကြက်​သားဝက်​သားဒါပဲလှည့်​ပတ်​စား​နေ​တော့မရိုး​အောင်​ချတ်​​ကျွေးချင်​လို့ပါကူညီနိုင်​ရင်​ကူညီပါ​နော်​​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​
”ဟင်းတွဲစားချင်သူများအတွက် ချဉ်စပ် ငါးကောင်လုံးကြော်၊ ကြာဇံချက် နှင့် ရှောက်သီးသုပ်ကို http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=1023/ and http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=5184
ပုဇွန်ဟင်းလျာ၊ ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်၊ တာလပေါဟင်းချို ဟင်းတွဲ http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=5701/ , http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=5707/ and http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=5708/
that pying says: